Laan - Gpedia, Your Encyclopedia
Tiro badan oo laamaha geedka oo kala dherer duwan.
Laamaha dhirta waxaa ku dhegan caleemo aad u badan.
Laan wadar ahaan ah Laamo (ingiriis: Branch) waa faro dhaadheer oo ka baxa jirida geedaha, kuwaas oo dusha ay kaga xidhan yihiin caleemaha dhirta. Laamuhu waxay isku xidhaan caleemaha, ubaxa iyo inta kale ee geedka ayagoo kala gudbinaaya cuntada caleemuhu sameeyaan iyo biyaha iyo macdanta ka timaada xididada geedka.
Laamuhu waxay ka baxaan dhinacyada jirida ayagoo u jeeda dhinac ka duwan jihada jirida. Sidoo kale, dhererka iyo miisaanka laamuhu way kala duwan yihiin. Qaar ayaa aad u yar oo leh dhowr caleemood, halka kuwo kale aad u dhaadheer yihiin isla markaana sii bixiyaan laamo kale oo ayaga ku xidhan.
Inkastoo caleentu u badan tahay, laamaha naftoodu way ka qayb qaataan Habka Samayska Cuntada ee dhirta.
Laamaha geedaha qaarkood ayaa aad u dheer oo laamo kale ku sii xidhan yihiin.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Laan&oldid=143401"